Elite 3, sarudzo yakachipa yaJabra, inochengeta mhando [Ongororo] | Gadget nhau
Elite 3, sarudzo yakachipa yaJabra, inochengetedza mhando [Ongororo]
Takabatana mumaoko nekuvhurwa kweJabra Elite 7 Pro izvo zvatakaongorora pano muActualidad Gadget nguva pfupi yadarika, iyo yakachipa yakachipa mune Jabra katalogi kusvika parizvino yakasvika, takataura kuti zvaisagona kudaro sei nezve Elite 3, iyo yakanyanya "kudzora" vhezheni iyo ichiri chigadzirwa cheJabra nezvose izvo mutemo.
Tinokuunzira kuongorora kwakadzama kweJabra Elite 3, modhi ine kuzvitonga kukuru uye kuramba mvura ine ruzha rwakanakisa. Vatarise nesu kuti uone kuti ndezvipi zvemahedhifoni zveJabra zvinokwanisika kupa kusvika parizvino.
1 Zvishandiso uye dhizaini
2 Unyanzvi hunhu
3 Jabra Sound + inofanirwa kuve nayo
4 Kupikisa uye kunyaradza
5 Kuzvimiririra uye maonero mushure mekushandisa
6 Zvayakanakira nezvayakaipira
Panyaya yechitarisiko, sekuwanda kweJabra mahedhifoni, mutsara wekugadzira wekambani unochengetedzwa, zvigadzirwa umo nyaradzo uye ruzha zvinokunda zvakajeka kupfuura zvese zvimwe. Nenzira iyi, Jabra anoenderera mberi nekuchengetedza mafomu ayo akasarudzika ekuti kunyangwe angaite seakanyanya kunaka pamusika, ane chikonzero chekuve, izvo zvatove zvakanyanya kupfuura zvingataurwa nevakawanda.
Headphone Kuyera: 20,1 × 27,2 × 20,8mm
Nyaya kuyerwa: 64,15 × 28,47 × 34,6mm
Iyo kesi, kune chikamu chayo, inochengetedza dhizaini uye zviyero zvemhando, "pillbox" chimiro chakajairika muJabra uye icho, senge nemahedhifoni, chinotarisa chete pakuita uye kusimba. Pachiitiko ichi, kwavakada "kuvandudza" aya Jabra ari mumhando yemavara, uko kuwedzera kune yakasarudzika nhema uye goridhe rakareruka, isu tichakwanisa kuwana vhezheni mune navy blue uye imwe yepepuru yakareruka. .kukwezva maziso. UYEIyo modhi yakaongororwa mune yedu yakasviba, iyo inosanganisira mupakeji: Makusheni matanhatu ezeve esilicone (kuverengera ayo akatonamirwa munzeve), kesi yekuchaja, USB-C tambo, uye maearbuds.
Tine mahedhifoni ane nevatyairi (vatauri) ve6 millimeters, izvi zvinovapa zvichibva pane zvehunyanzvi ruzivo 20 Hz kusvika 20 kHz bandwidth yekutamba kwemimhanzi uye kubva pa100 Hz kusvika pa8 kHz patinotaura nezvenhaurirano dzenhare. Zvinoenderana nezvambotaurwa, ine maikorofoni mana eMEMS anotibatsira kuchengetedza hurukuro dzakajeka, chimwe chinhu chinowanzoitika muJabra. Iyo bandwidth yemakrofoni iri pakati pe100 Hz ne8 kHz, sezvataona mune ruzivo nezve bandwidth yekufona parunhare.
Kuchaja kesi uremu: 33,4 magiramu
Kurema kwefoni: 4,6 gramu
Qualcomm aptX yeHD odhiyo
Ndingatenga kupi Jabra Elite 3 nemutengo wakanakisa? In IYI BHUKU.
Padanho rekubatanidza, aya mahedhifoni ane Bluetooth 5.2 iyo inonyanya kushandiswa maprofiles anoshandiswa A2DP v1.3, AVRCP v1.6, HFP v1.7, HSP v1.2, ine huwandu hwechinyakare kushandiswa kwemamita gumi uye mukana. yekubata nemusoro michina inosvika mitanhatu. Zviripachena, semhedzisiro yekushandiswa kweBluetooth 5.2, ivo vane otomatiki ignition system patinovabvisa mubhokisi. uye kudzima otomatiki zvakare kana vari maminetsi gumi nemashanu pasina kubatana kana maminetsi makumi matatu pasina basa.
Jabra Sound + inofanirwa kuve nayo
Iyo Jabra application ndeye-software yekuwedzera iyo inotitendera kuti tiite zvigadziriso zvinodikanwa, kupfuura mabhatani emuchina anowanikwa pamahedhifoni akataurwa uye ayo isu tinogona kugadzirisa pakuda mune yakataurwa application, isu tine equalization kugona pamwe nesoftware inogadziridza inoita kuti software yako ive yakakosha uye inokwanisa kusarudza kuitenga. Ichi chishandiso, chinoenderana nezvose zviri zviviri Android uye iOS zvishandiso, zvinokutendera iwe kuti uite nhamba yakanaka yekumisikidza iyo yakakodzera kuyedza nekuda kwezvikonzero zvakawanda.
Nenzira iyi, isu tinokurudzira kuti uende kuburikidza nechero mavhidhiyo atakaongorora Jabra zvishandiso pane dzimwe nguva kuti iwe ugone kuona mashandiro eInzwi +, iyi Jabra application iyo yakasununguka kurodha.
Kupikisa uye kunyaradza
Muchiitiko ichi isu tinopokana nemvura uye inoputika neIP55 certification, izvi zvinotivimbisa kuti tichakwanisa kuzvishandisa mumvura uye kana tichidzidzira. Panyaya iyi, Jabra inochengetedza mwero wemhando zvisinei nekuti, sezvatataura, Isu takatarisana nechigadzirwa chakachipa kusvika parizvino mukatalogi yekambani.
Nenzira imwecheteyo, pamwero wekuvandudza kunaka kwekubatanidza uye kunyaradzwa kwekushandisa, aya Jabra Elite 3 ane matatu akasanganiswa anonakidza echitatu-bato software anogona kuita kuti hupenyu hwedu huve nyore:
Google Fast Pair, yekubatanidza yakazara pairing uye kushanda pane inowirirana Android uye Chromebook zvishandiso.
Spotify Tap, kugadzirisa uye kugadzirisa magadzirirwo emabhatani kana isu tichishandisa iyo Spotify yekutamba chikuva.
Yakabatanidzwa Alexa kuti iwirirane zvakare neAmazon chaiyo mubatsiri.
Kuzvimiririra uye maonero mushure mekushandisa
Jabra akatipa data rakavimbika maererano nemAh yebhatiri, chimwe chinhu chakajairika mumhando, zvakadaro Vanofanotaura maawa manomwe ekuzvimiririra ane mutero uye anosvika maawa makumi maviri nemasere kana tikasanganisira mhosva dzakaitwa nenyaya yacho. Iyo femu inotivimbisawo kuti nemaminitsi gumi chete ekuchaja tichawana ingangoita awa imwe yekushandisa. Idzi data dzinogadzirwazve dzinenge dzakazara mumayedzo edu, kunyanya tichifunga kuti ivo havana kushingaira kudzima ruzha (ANC) uye chero isu tisingashandisi HearThrough modhi yatovepo mune angangoita ese maJabra maturusi emhando dzakasiyana.
Ruzha rwemhando yakanaka kana iwe uchifunga nezve mutengo, chiyero chemhando inochengetwa muJabra nekufamba kwenguva, uye ndizvo. Aya maElite 3 anogona kuwanikwa nemari isingasviki 80 euros munzvimbo dzakajairika dzekutengesa, kuvaita sarudzo yakanaka kune avo vari kutsvaga kutenga Jabra chigadzirwa kekutanga kana kutsiva "special" chiitiko. Pasina kupokana, senguva dzose, Jabra akakwanisa kugadzira chigadzirwa chisingaremekedzi chinopa izvo zvazvinopa.
Yakatumirwa pa: December 20 we2021
Kugadziridza kwekupedzisira: December 11 we2021
Yakanaka kwazvo ruzha rwemhando uye simba
Mitengo iri pakati nepakati paJabra
Magadzirirwo anogona kuita sarudzo
Hapana mapedhi akanaka
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Reviews » Elite 3, sarudzo yakachipa yaJabra, inochengetedza mhando [Ongororo]
Tronsmart ONYX PRIME, kuongorora uye kuita
Kuenzanisa kwenhare: Doogee V10 vs Doogee V20